Now Time to Turn With Digital / Chandragiri
केबल टिभी होइन, अब अनिवार्य डिजिटल टिभी
तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्ला तर अबको २/३ वर्षमै एनालग प्रविधिको टेलिभिजन देख्न पाइने छैन । स्वभाविक जिज्ञासा उठ्छ– कसरी ? अन्तर्राष्ट्रिय दुरसञ्चार संगठन (आइटीयू)ले सन् २०१८ सम्ममा सबै केबल टेलिभिजनहरु डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन भइसक्नुपर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल पनि आइटियूको सदस्य भएकाले यो नीति नेपालको लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
आइटियूको सोही प्रावधानलाई ध्यान दिदै नेपाल सरकारले पनि महानगरपालिक तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा चार वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा पाँचवर्षभित्र एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । उक्त मितिको गणना ०७० बैसाख १६ देखि सुरु भइसकेको छ । सरकारले २०७४ सम्ममा सबै केबल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कसरी सञ्चालन हुन्छ त डिजिटल टेलिभिजन ? यसका लागि कुनै छुट्टै टेलिभिजन कम्पनी स्थापना हुने होइन । न त भएका टेलिभिजन कम्पनीहरुलाई नै डिजिटल बनाउने भनिएको हो । यसका लागि अहिले केबलमार्फत् भइरहेको टेलिभिजन वितरणको एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न लागिएको हो । अहिले केबुलमार्फत् भइरहेको टेलिभिजन वितरण अब अप्टिकल फाइबर मार्फत वितरण हुन्छ । आइटियुको प्रावधान र सरकारको योजना अनुसार आगामी २०७४ सम्ममा सबै घरमा यस्तो डिजिटल प्रणाली पु¥याइसक्नुपर्ने छ ।
‘अब हर घर डिजिटल’ भन्ने नाराको साथ सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रालि (सीम टिभी)ले डिजिटल टेलिभिजिनको वितरण सुरु गरिसकेको छ । जापान, जर्मनी, हङकङ र ताइवानका लगानीकर्ता सहितको लगानीमा नेपालमा स्थापना भएको नीजि क्षेत्रको कम्पनी सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रालिले डिजिटल टेलिभिजनको वितरण सुरु गरेको हो ।
अहिले काठमाडौं, चितवन,नवलपरासी; पोखरा, नेपालगञ्ज, दाङ, इटहरी, धनगढी लगायतका मूख्य शहरमा यस्तो सेवा सुरु भइसकेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एमके पौडेलले जानकारी दिए । अबको केही समयमै धनगढी, सल्यान, रुकुम, धौलागिरी, बाँके, धरान विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा डिजिटल टेलिभिजन सुरु हुने उनले बताए ।
डिजिटल टेलिभिजन प्रणाली सुरु भएपछि अहिलेजस्तो एउटा केबुलबाट ३/४ वटा टेलिभिजन हेर्न भने मिल्दैन । डिजिटल प्रणाली अन्र्तगत हरेक टेलिभिजनको लागि एउटा सेटअप बक्स दिइन्छ । तपाइले पैसा तिरेको आधारमा उक्त सेटअप बक्सले निश्चित टेलिभिजन च्यानलहरु उपलब्ध गराउँछ । जस्तो कि, मासिक ३५० रुपैयाँ तिर्दा ९० बटा एसडी च्यानल हेर्न पाइन्छ । त्यसैगरी, मासिक ५ सय रुपैयाँ तिर्ने हो भने ११० वटा एसडी र ५ वटा हाइडिफिनेशन (एचडी) टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाइन्छ । ग्राहकले चाहेअनुसार जनरल इन्टरटेनमेन्ट प्रति च्यानल २० रुपैयाँ, लाइफ स्टाइल तथा एडभेन्चर ३० रुपैयाँ, मुभी ४० रुपैयाँ र स्पोर्ट्स च्यानल ५० रुपैयाँका दरले थप्दै जान पनि सक्नेछन् ।
टेलिभिजन च्यानल हेर्नको लागि मोवाइल रिचार्ज गरेजस्तै सेटअप बक्सको रिचार्ज गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बजारमा मोवाइलको जस्तै रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराइने पौडेलले बताए । बैंकमार्फत् पनि रिचार्ज गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले दिएको सेटअपबक्ससँगै प्याकेजमा इन्टरनेट सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ । तर, यो प्याकेजको मूल्य भने अहिले नै तय नभइसकेको उनले बताए ।
डिजिटल टेलिभिजन वितरणको लागि कम्पनीले १२ लाख ग्राहकलाई सेटअप बक्स निःशुल्क दिन लागिएको प्रबन्ध निर्देशक एमके पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले बजारमा किन्ने हो भने एउटा सेटअप बक्सको ४/५ हजार रुपैयाँ पर्छ । तर, हामी १२ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क सेटअप बक्स दिनेछौं ।’
अब टेलिभिजन च्यानल डिजिटल रुपमा प्रसारण हुन थालेपछि सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनको दावी छ । ‘अहिले एनालगबाट टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुँदा कति ग्राहकले टेलिभिजन हेरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन सकिदैन । एउटै केबलबाट धेरैवटा टेलिभिजन हेरिएको हुनसक्छ । तर, डिजिटल भएपपिछ एउटा टिभीको लागि एउटा सेटअप बक्स चाहिन्छ’, उनले भने, ‘अब प्रत्येक ग्राहकबाट सरकारले राजश्व पाउँछ ।’
ग्राहकको डाटाबेसको लागि कम्पनीले सिए सिस्टम सञ्चालन गरेको छ । यही सिस्टमबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ । यस्तो सिस्टम नेपाल सरकारसँग पनि हुन्छ । यही सिस्टमबाट कति जनाले टेलिभिजन हेरिरहेका छन् भन्ने पत्ता लाग्ने हुँदा सरकारले त्यही अनुसार टेलिभिजन च्यानल वितरण गर्ने कम्पनीबाट राजश्व संकलन गर्छ । ग्राहकले भने रिचार्ज गर्दा नै कर तिरिसकेका हुन्छन् ।